तल्लो पेट किन दुख्छ ? से’तोपानी बग्नुको कारण यस्तो छ, हे’र्नुहोस डाक्टरको सु;झाव (भिडियो सहित) – Ap Nepal
तल्लो पेट किन दुख्छ ? से’तोपानी बग्नुको कारण यस्तो छ, हे’र्नुहोस डाक्टरको सु;झाव (भिडियो सहित)
आजकाल धेरै महिलाको साझा समस्या भनेको, पाठेघर दुखाइ हुने गरेको छ । महिनावारी अघि र पछि पनि तल्लो पेट दुख्ने समस्याले महिलालाई निरन्तर सताउँने गर्दछ ।
तर यसको सही उपचार नभएमा बिस्तारै महिलाको स्वास्थ्य नै प्रभावित बनाइदिन्छ । हुन त महिनावारी भएको समयमा हल्का पेट दुख्नु सामान्य हो । तर पिसाबमा संक्रमण, पाठेघरको छेउछाउमा संक्रमण हुने दुखाइ निकै घातक हुनसक्छ ।
यस्तोमा तल्लो पेटको दुखाईले महिलालाई पछि ठूलो समस्या आइलाग्न सक्छ । जसलाई लक्षण अनुसार कारण पहिल्याएर उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । कतिपय महिलालाई महिनावारी गडबडीले तल्लो पेट दुख्ने गर्छ भने कसैलाई योनीबाट रगत जाने कारणले समेत दुख्ने गर्दछ । यसरी तल्लो पेट दुख्नु पाठेघरको टिबी हुनसक्छ ।
यस्तोमा खान मन नलाग्ने, तौल कम हुने, थकाइ लाग्ने, अलिकति काम गर्ने बित्तिकै थाक्ने, ज्वरो आउने हुने गर्दछ । यसै बिषयमा हामीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र साहारा अस्पताल पोखराका प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. राजेश अधिकारीसंग महिलाहरुको तल्लो पेट दुख्ने र सेतो पानी बग्ने समस्याको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ ।
उहाँसंग गरिएको कुराकानी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस ।
Posted in भिडियो, स्वास्थ्य /जिबनशैली
Prevयसरी सु:रु भएको रहेछ रमेश र नन्दाको प्रेम, नन्दाको बहिनी यसो भन्छिन् (भि,डियो हेर्नुस्)
Nextबालिकाले अनलाइनबाट एउटा खाना अर्डर गर्दा , घरअगाडि ४२ जना डे:लिभरी ब्वायको लाग्यो लाइन (भिडियो सहित)
दिदीको बिहेमा सालीले भिनाजूको जुत्ता लु’ काउँदा भयो ल फडा, दुलाहाको हर्कत देखेर दुलहीले बो, लाइन् प्रहरी
मेरो बच्चा मैले कसरी बचाउनु ,पिलाउने दूध पनि छैन, आमा रु:दै मिडियामा (हेर्नुस् भि; डियो सहित )
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ का वि, जेता किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवे, शमा रोक
ओली सरकारले जाँदा–जाँदै बढायो गाडी भाडा ! कति बढ्यो त ?
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (119261)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (72493)